स्मार्टफोनको प्याटर्न लकको पासवर्ड बिर्सनु भयो ? चिन्ता नगर्नुस, अनलक गर्ने सम्पूर्ण तरिका यहाँ छ - Technology Khabar
» स्मार्टफोनको प्याटर्न लकको पासवर्ड बिर्सनु भयो ? चिन्ता नगर्नुस, अनलक गर्ने सम्पूर्ण तरिका यहाँ छ
स्मार्टफोनको प्याटर्न लकको पासवर्ड बिर्सनु भयो ? चिन्ता नगर्नुस, अनलक गर्ने सम्पूर्ण तरिका यहाँ छ
स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने प्रायः व्यक्तिले आफ्नो निजी च्याट र डाटा सुरक्षित राख्न मोबाइलमा प्याटर्न लक वा पासवर्ड प्रयोग गर्दछन्। यस्तो सावधानीको कारणले, कुनै अन्य व्यक्तिले तपाईँको फोन सजिलै खोल्न सक्दैन।
कठिनाई त्यसबेला हुन्छ जब प्याटर्न लक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले यसलाई खोल्ने पासवर्ड बिर्सन्छ। यस्तो अवस्थामा, स्मार्टफोन लक (अनलक फोन) खोल्न नचाहे पनि, सेवा केन्द्र धाउनुपर्ने हुन्छ । यो केवल समयको बर्बादी मात्र होईन, रकम खर्च हुनुका साथै तपाईँको सबै डाटा पनि हराउन सक्नेछ ।
यदि तपाईंले कहिले मोबाईल फोनको पासवर्ड खोल्न बिर्सनुभयो भने नडराउनुहोस्। आज हामी तपाईंलाई यहाँ घरमै बसेर केही मिनेटमा नै तपाईंको फोन अनलक गर्ने तरिका सिकाउनेछौं ।
कसरी फोन अनलक गर्ने
यदि तपाईंले पासवर्ड बिर्सनु भएको छ भने, तपाईं अनलक गर्न चाहानुहुने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई स्विच अफ गर्नुहोस्। अब कम्तिमा एक मिनेट कुर्नुहोस्। त्यसपछि अब भोल्युम र पावर बटन सँगसँगै एकैपटक थिच्नुहोस्। यस पछि फोन रिकभरी मोडमा जान्छ र यहाँ फ्याक्ट्री रिसेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
डाटा क्लिन गर्नुहोस् र पुनः सुरु गर्नुहोस्
डाटा सफा गर्नको लागि वाइप क्यासमा(wipe Cache) ट्याप गर्नुहोस्। १ मिनेट फेरि कुर्नुहोस् र तपाईंको एन्ड्रोइड डिभाइस सुरु गर्नुहोस्। अब तपाईंको फोन अनलक हुनेछ, यद्यपि सबै लग इन आईडी र फोनमा पछि राखेका मोबाइल एपहरू मेटिने छन्, तर तपाईं फेरि ती एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
फोनमा इन्टरनेट कनेक्सन
यो ट्रिकले त्यसबेला मात्र कार्य गर्दछ जब तपाईँको लक स्मार्टफोनमा इन्टरनेट कनेक्सन चालु रहेको छ। यदि तपाईंको डाटा कनेक्सन खुल्ला छ भने, तब तपाईँ सजिलैसँग आफ्नो डिभाइस अनलक गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि स्मार्टफोन लिनुहोस् र यसमा ५ पटक गलत प्याटर्न लक चलाउनुहोस्। अब तपाईँले एक नोटिफिकेसन देख्नुहुनेछ, जुनमा यो लेखिएको हुनेछ- ३० सेकेन्ड पछि मात्र प्रयास गर्नुहोस्।
जीमेल आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्
अब त्यहाँ बिर्सिएको पासवर्डको लागी एक विकल्प हुनेछ। यसमा तपाईंको जीमेल आईडी र पासवर्ड राख्नुहोस्, जुन तपाईंले लक गरिएको डिभाइसमा राख्नुभएको थियो। यस पछि, तपाईंको फोन अनलक हुनेछ। अब तपाइँ नयाँ प्याटर्न लक सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
आईफोन १२ सिरिजको क्रेजः विश्वभर पहिलो त्रैमासमा आम्दानी मध्ये एकतिहाई हिस्सा
जाबोमीको ‘एमआई ६’ नेपाली बजारमा आउँदै, ६ जीबी र्याम र डयूल रियर क्यामरा